Lior Lustig နှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌အိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအကြံပေးမှု၏ပြီးပြည့်စုံသောနာရီ
ပရီမီယံ အကြံဉာဏ် တစ်ပုဒ်
အိမ်ခြံမြေ - The Real Estate Encyclopedia
အိမ်ခြံမြေစွန့် ဦး တီထွင်လုပ်ငန်း
စာရင်းပေးသွင်းသူများအတွက်အိမ်ခြံမြေသင်တန်းသို့ ၀ င်ရောက်ပါ
ဝဘ်ဆိုက်အထောက်အပံ့အဖွဲ့ - သင်တန်းဖိုင်များနှင့်အပိုအသံသွင်းချက်များကိုရယူပါ
MentorMind - အုပ်စုလိုက်လမ်းညွှန်အစီအစဉ်
Mentormind - အခြေခံအထုပ်အတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်း
Mentormind - တိုးချဲ့အထုပ်အတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်း
Mentormind - စာရင်းပေးသူများအတွက်လေ့လာမှုအုပ်စုနှင့်အသံသွင်း
Facebook Real Estate Mentoring Support Group
စာရင်းမသွင်းမီ MentorMind အစီအစဉ်အတွက်အကြံဥာဏ်
MentorMind အစောင့်အကြပ်အစည်းအဝေးများအသံသွင်းခြင်း - ယခင်သီချင်းများ
ပညာပေး site ကိုစာရင်းပေးသွင်းခြင်း - Real Smart
အိမ်ခြံမြေကျွမ်းကျင်သူများအဖွဲ့ - မေးခွန်းနှင့်အဖြေများဖိုရမ်
Nafdia အိမ်ခြံမြေ၊ အိမ်ခြံမြေစွယ်စုံကျမ်း
မင်းရဲ့အိမ်ရာမြေတွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဘယ်လိုရောင်းမလဲ - သိကောင်းစရာများနှင့်အကြံပြုချက်များ
အိမ်ခြံမြေရောင်းဝယ်သူ - ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမလုပ်မီအိမ်ခြံမြေအရောင်းအဝယ်များကိုလေ့လာခြင်း
အိမ်ခြံမြေစျေးကွက် - အိမ်ခြံမြေကုမ္ပဏီများအတွက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်ကြော်ငြာ
အပို ၀ န်ဆောင်မှုများ
Mentormind - အိမ်ခြံမြေလေ့လာမှုများတွင် ကျွမ်းကျင်သောလမ်းညွှန်မှု
Pacific Holdings တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည်
တွဲဖက်အစီအစဉ်သို့ ၀ င်ပါ
Nadlan Capital Group ၏တွဲဖက်အစီအစဉ်
အိမ်ခြံမြေဆွေးနွေးပွဲများ၊ ပညာရှင်ဟောပြောချက်များ - မေးခွန်းနှင့်အဖြေဖိုရမ်
ကျွန်ုပ်တို့၏ Facebook group သို့ ၀ င်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏ youtube channel
မကြာသေးမီက site လှုပ်ရှားမှု
အိမ်ခြံမြေပြပွဲ - အစည်းအဝေးများနှင့်အစည်းအဝေးများ
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနယ်ပယ်သည် Facebook တွင်ရှိနေသည်
အကြံပြုထားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပစ်မှတ်များ - ဟီဘရူး
Cincinnati နှင့် Dayton, Ohio
Pittsburgh, Pennsylvania ပြည်နယ်
အကြံပြုထားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည့်နေရာများ - အင်္ဂလိပ်
ဘာမင်ဂမ်, Alabama အဘိဓါန်
Texas ပြည်နယ် Dallas
Indianapolis, Indiana ပြည်နယ်
တွင် Kansas City, မစ်ဆူရီ
မင်း လာခဲ့တာ ကောင်းတယ်။
ဤနေရာတွင် အသိပညာသည် စမတ်ကျသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက် သင့်စွမ်းအားဖြစ်သည်။
Texas၊ Houston ၏ပူပြင်းသောစျေးကွက်တွင်နေ့စဉ်အမြတ်အစွန်းရှိသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု
ပထမရက်မှ ပုံသေ ငွေသားစီးဆင်းမှုနှင့် ရောင်းရငွေ
တန်ဖိုးတိုးမြင့်ရန်နှင့် ငှားရမ်းခများ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေရန် အလားအလာရှိသော အမေရိကန်မှ ရန်ပုံငွေ 536 တိုက်ခန်းအတွက် ကြီးမားသောသဘောတူညီချက်တစ်ခု။
အိမ်ခြံမြေ ဖိုရမ်ကို ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများ နှင့် စိတ်ပါဝင်စားသူများ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ အိမ်ခြံမြေ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနယ်ပယ်တွင် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် သတင်းအချက်အလက် ရရှိစေရန် ရည်ရွယ်ပြီး တည်ထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤနယ်ပယ်ကို ရှုပ်ထွေးသောများစွာသောသူများက နားလည်ထားသောကြောင့် ဖိုရမ်သည် ယုံကြည်စိတ်ချရသော အသိပညာရင်းမြစ်တစ်ခုအဖြစ်နှင့် စမတ်ကျပြီး အကျိုးအမြတ်ရှိသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများပြုလုပ်ရန်အတွက် အသိပညာလိုသူများအတွက် မြေသြဇာကောင်းသည့်နေရာတစ်ခုအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ဖိုရမ်တွင် သင့်အား ယုံကြည်စိတ်ချရပြီး ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သတင်းအချက်အလက်များ၊ နယ်ပယ်တွင်းသတင်းများနှင့် မိုးရွာသွန်းမှုအတွက် ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် အကျိုးကျေးဇူးများစွာကို ပေးဆောင်ပေးမည့် နယ်ပယ်မှ ကျွမ်းကျင်သူများနှင့် တွေ့ဆုံမည်ဖြစ်သည်။
ဘယ်အရာမဆို သင်ယူနိုင်တဲ့ အသစ်အဆန်းတွေ အမြဲရှိနေတယ်။ ဤသည်မှာ အနန္တစကြာဝဠာတွင် ရှိနေပုံပင်
အွန်လိုင်းနှီးနှောဖလှယ်ပွဲများ၊ ပို့ချချက်များနှင့် podcast များ
ဒေါ်လာ သန်း 0
ဝဘ်ဆိုက်၏ အဖွဲ့ဝင်များမှ ရယူထားသော ပိုင်ဆိုင်မှုများမှ ဖန်တီးထားသော တန်ဖိုး
အိမ်ခြံမြေ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု သတင်းများ
ဇန်နဝါရီလ 13, 2022 မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
ကမ်းလှမ်းချက်များစွာနှင့် ၎င်းတို့ထဲတွင် အရာအားလုံး
ဇန်နဝါရီလ 12, 2022 မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
ဤသည်မှာ တစ်နှစ်တာ၏ အခမ်းနားဆုံးအချိန်ဖြစ်သည်။
ဇန်နဝါရီလ 11, 2022 မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
အိမ်ခြံမြေစွယ်စုံကျမ်း - US ရှိ အိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် အချက်အလက်နှင့် လမ်းညွှန်များ
လက်ကား (လက်ကား) အိမ်ခြံမြေရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ဘာလဲ။
အိမ်ခြံမြေတွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်းသည် စတော့ရှယ်ယာများနှင့် ငွေချေးစာချုပ်များတွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်းနှင့် မတူပါ။ ဤစျေးကွက်နှစ်ခုလုံးဖြင့် သင်သည် $100 ဖြင့် တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်နိုင်ပြီး သင်အလိုရှိတိုင်း ဝင်ထွက်နိုင်သည်။ ဒါပေမယ့် အဲဒါမဟုတ်ဘူး။
ကတိပြုစာ - ကတိစာချုပ်သည်ဤနေရာတွင်အဖွဲ့ဝင်အချို့၏တောင်းဆိုချက်များနှင့်သီးသန့်ဖြစ်သည်။ ကတိပြုစာတစ်စောင်သည်အိမ်ငှား၏ဝတ္တရားများကိုလုံခြုံစေရန်အငှားစာချုပ်များတွင်လက်ခံထားသောဘုံသဘောတူညီချက်များအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်
အမေရိကားမှာဘဏ်စာရင်းဖွင့်ဖို့ဘယ်လောက်ကုန်ကျလဲ။ ဘယ်ဘဏ်ဖွင့်တာပိုကောင်းလဲ။ မည်သူမဆိုဤအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ ထောက်ခံချက်ရှိသည်
မိုဘိုင်းအိမ်? မရွေ့ပါဘူးလို့မျှော်လင့်တယ် ... ထုတ်လုပ်တဲ့ / အိမ်သုံးပစ္စည်း ၀ ယ်ခြင်း၊ ရောင်းခြင်းနှင့်လက်ကမ်းခြင်းသိရန်အရေးကြီးသည်။ အဆိုပါယူဆချက်သည်သင်ပေါင်နှံရန်လိုအပ်သော ၀ ယ်သူများအပါအ ၀ င်ပရိသတ်ကိုတတ်နိုင်သမျှကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ရောက်ရှိရန်လိုလိမ့်မည်။ ငွေချေးသူများစွာသည်ထိုကဲ့သို့သောအိမ်များကိုလုံးဝဂရုမစိုက်ပါ၊ ထိုသူများအတွက်သတ်မှတ်ထားသောလိုအပ်ချက်အနည်းအကျဉ်းသာရှိသည်။ အိမ်ခြံမြေ၌၎င်းသည်ဖြေရှင်းသင့်သည်။ ...
Houston Texas Multi Family Tour - ကျွန်ုပ်တို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုခရီးစဉ် - Carmel Creek၊ Houston၊ Texas
Nadlan တက္ကသိုလ် - Mentormind - အစည်းအဝေး 8 - နောက်ဆုံး - ဟီးဘရူး
ပေါ့တ်ကာစ်များ - အိမ်ခြံမြေနံပါတ်များ ကျွမ်းကျင်သူများ
Lior Lustig - အဖွင့်တရားတော် - အိမ်ခြံမြေမှာ ဘယ်လိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံရမလဲ
Dani Beit -Or - ငါ့ကို ၄၅၀၀ ကျော်အပေးအယူတွေဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲ
နောက်ထပ် ပေါ့တ်ကာစ်များအတွက် >>
သူများတွေရှေ့မှာ အချက်အလက်အားလုံးကို လိုချင်သလား။
ကျွန်ုပ်တို့၏သတင်းလွှာအတွက် ယခုပင် စာရင်းသွင်းလိုက်ပါ။
အိမ်ခြံမြေကုမ္ပဏီနှင့် Laino တို့သည် ရပ်ရွာလူထုကို အထူးကောင်းမွန်သောစျေးနှုန်းများဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် နယ်ပယ်ရှိ ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီများနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ပါသည်။
ဝန်ဆောင်မှုအားလုံးကို site ဝန်ထမ်းများက စောင့်ကြည့်နေပြီး ၎င်းတို့၏ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို အချိန်တိုင်း စစ်ဆေးပါသည်။
သင့်အနေဖြင့် ဖိုရမ်အဖွဲ့ဝင်များမှ သုံးသပ်ချက်များနှင့် အကြံပြုချက်များနှင့်အတူ United States တွင် စျေးကွက်ချဲ့ထွင်သည့် ကုမ္ပဏီများ၏ ဒေတာဘေ့စ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ပုဂ္ဂလိက ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများအတွက် သို့မဟုတ် နယ်ပယ်တွင် ပါ၀င်လုပ်ကိုင်နိုင်စေမည့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဗဟုသုတများ ဆည်းပူးနိုင်စေမည့် အိမ်ခြံမြေနယ်ပယ်တွင် လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းများ အမျိုးမျိုးရှိသည်။
သင့်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့ရန် ဆွဲဆောင်မှုရှိသောကမ်းလှမ်းချက်ကို ရယူပါ။ $100 အထက် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများအတွက် အကြီးတန်းဘဏ္ဍာရေးအကြံပေးများသည် သင့်အနေနှင့် ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်သည်။
ကျွမ်းကျင်ပြီး အတွေ့အကြုံရှိသော လမ်းညွှန်ဆရာများမှ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ လမ်းညွှန်ထားသော အွန်လိုင်းလေ့လာမှုနှင့် လမ်းညွှန်အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး သင့်အား အိမ်ခြံမြေကို အောင်မြင်စွာဝယ်ယူနိုင်စေရန် အသိပညာပေးမည့်။
အိမ်ခြံမြေ အရောင်းအဝယ်များကို လေ့လာခြင်း။
ပြီးပြည့်စုံသော အစီရင်ခံစာကို မရရှိမီ မရင်းနှီးပါနှင့်။ ရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်းမပြုမီ၊ အိမ်ခြံမြေနှင့်ပတ်သက်သော တိကျသောအချက်အလက်များကို ပေးဆောင်သည့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအစီရင်ခံစာကို ရယူလိုက်ကြပါစို့။
စာပို့ခြင်း၊ ပေါ့တ်ကာစ်များ၊ ဖိုရမ် ညီလာခံများနှင့် အခြားအရာများ။ ကုမ္ပဏီများသည် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူပရိသတ်အတွက် ထူးခြားသော ကြော်ငြာပက်ကေ့ချ်များစွာကို နှစ်သက်ကြသည်။
အိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် ၀ န်ဆောင်မှု
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀၀ နှင့်အထက်ချေးငွေအတွက်ဘဏ်များနှင့်ပေါင်နှံအကြံပေးများနှင့်အလုပ်လုပ်သည်
အပေါင်ခံဂဏန်းတွက်စက်၊ ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း၊ လှန်ခြင်း၊ BRRRR၊ လက်ကားရောင်းချခြင်း၊ ငှားရမ်းခြင်းနှင့်အခြားအရာများမှအထွက်နှုန်း
နိုင်ငံ ၅၀ မှအရောင်းအ ၀ ယ်နယ်ပယ်
ကျွန်ုပ်တို့၏အရောင်းအဝယ်နယ်ပယ်သည်နေ့စဉ် ၀ က်ဘ်ဆိုက်ပေါင်း ၁၀၀၀ ကျော်မှအရောင်းအ ၀ ယ်များကိုနေရာချထားသည်
တွက်ချက်မှုများ၊ သဘောတူညီချက်များ၊ အစီရင်ခံစာများနှင့်အခြားအရာများအတွက် Excel ပါ ၀ င်သောအိမ်ခြံမြေဖိုင် ၅၀၀ ကျော်။
ဖိုင် repository ကို
အမေရိကန်ရှိအိမ်ခြံမြေကုမ္ပဏီများအတွက်အရောင်းအ ၀ ယ်လမ်းညွှန်နှင့်ဖိုရမ်အကြံပြုချက်များ
ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်ခြံမြေ podcast တွင်အိမ်ခြံမြေကျွမ်းကျင်သူများနှင့်အသေးစိတ်တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုများပါ ၀ င်သည်
လေယာဉ်မစီးဘဲဘဏ်နှင့်ကုမ္ပဏီအကောင့်ဖွင့်ခြင်း၊ စာရင်းကိုင်များ၊ ရှေ့နေများနှင့်အခြားအရာများနှင့်စျေးလျှော့ပါ။
အိမ်ခြံမြေလောကတွင်စွန့် ဦး တီထွင်သူများ၊ နံပါတ်များ၊ webinars များ၊ အိမ်ခြံမြေအစည်းအဝေးများ၊ ညီလာခံများနှင့်အရာအားလုံး
အသင်းသားများအတွက် ဦး ဆောင်သူများအတွက်အပိုဆုကြေးများ + ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက်လက်ဆောင်
ယနေ့သတင်းအချက်အလက်များ၊ ဒေသတွင်းသတင်းအချက်အလက်များ၊ အလုပ်ရှင်များအပါအ ၀ င်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိအပူဆုံးနိုင်ငံများနှင့်မြို့များအားလုံးအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်
အိမ်ခြံမြေဖိုရမ်သည် သင့်အား အောင်မြင်မှု၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် ခွင့်ပြုထားသည်။
ဖိုရမ်၏ အမျိုးမျိုးသော ဝန်ဆောင်မှုများကို စျေးကွက်ချဲ့ထွင်ပါ။
အိမ်ခြံမြေဖိုရမ်၏ အပူဆုံး ကျွမ်းကျင်သူနယ်ပယ်
စစ်မှန်သောဖိုရမ်သည် ဤနေရာတွင် စတင်ပါသည်။ မင်းမေးမယ်၊
ပြီးတော့ US မှာရှိတဲ့ အိမ်ခြံမြေ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကျွမ်းကျင်သူတွေက ဖြေပါတယ်။ မင်းရဲ့ အထင်အမြင်အရ ကျွမ်းကျင်သူကို ရွေးချယ်နိုင်ပြီး သူ့ကို ဆက်သွယ်ပြီး အဖြေတစ်ခု ရယူနိုင်ပါတယ်။
ကျွမ်းကျင်သူများ - Rotem Eckman
ဤသည်မှာ အိမ်ခြံမြေကျွမ်းကျင်သူ Rotem Eckman ၏ ပညာပေးအဖွဲ့ဖြစ်သည်။
ကျွမ်းကျင်သူများ - နောက်ထပ် Tasa
ဤသည်မှာ အိမ်ခြံမြေကျွမ်းကျင်သူ Meir Tasa ၏ ပညာပေးအဖွဲ့ဖြစ်သည်။
ကျွမ်းကျင်သူများ - Aviad Rave
ဤသည်မှာ အိမ်ခြံမြေကျွမ်းကျင်သူ Aviad Rave ၏ ပညာပေးအဖွဲ့ဖြစ်သည်။
ကျွမ်းကျင်သူများ - Daniel Nissim
ဤသည်မှာ အိမ်ခြံမြေကျွမ်းကျင်သူ Daniel Nissim ၏ ပညာပေးအဖွဲ့ဖြစ်သည်။
ကျွမ်းကျင်သူများ >> နယ်ပယ်သို့ ဝင်ရောက်ခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ပွဲများနှင့် ကွန်ဖရင့်များသည် တိုက်ရိုက်တွေ့ဆုံခြင်း၊ စကားပြောဆိုခြင်းနှင့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အချက်အလက်များကို တိုက်ရိုက်ရယူရန် သင့်အခွင့်အရေးဖြစ်သည်။
ဤနေရာတွင် သင်သည် အစီအစဉ်များပြက္ခဒိန်တွင် မွမ်းမံနေနိုင်သည်၊ စာရင်းသွင်းပြီး ရောက်ရှိလာနိုင်သည်။
အသိပညာသည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက် သင်၏စွမ်းအားဖြစ်သည်။
ဖိုင်များ၊ သဘောတူညီချက်များနှင့် အစီရင်ခံစာ ၅၀၀ ကျော်
နိုင်ငံပေါင်း 50 မှ ငွေလွှဲလုပ်ငန်း
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ဝဘ်ဆိုဒ် 1000 ကျော်မှ အချိန်နှင့်တပြေးညီ ငွေပေးငွေယူများ
တစ်နေရာတည်းတွင် US ပြည်နယ်နှင့်မြို့များအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်
Real Smart စာရင်းသွင်းသူများသည် သီးသန့်အကျိုးခံစားခွင့်များကို ခံစားကြသည်။
ကွန်ဖရင့်များ၊ နှင့် ဒွိစုံများ၊ အိမ်ခြံမြေ အစည်းအဝေးများနှင့် နယ်ပယ်တွင် ပူပြင်းသော အရာအားလုံး
ဖိုရမ်အဖွဲ့ဝင်များမှ ပြုလုပ်သော လတ်တလော ငွေပေးငွေယူများ
နိုင်ငံတစ်ခုစီနှင့် ၎င်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများ - အဲဒါကို ပြောကြည့်ရအောင်
Hand Trading Arena 2
အမျိုးမျိုးသော သဘောတူညီချက်များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများသည် သင့်အား ဤနေရာတွင် စောင့်ကြိုနေပါသည်။
အသိပညာသည် စွမ်းအားဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့် သင့်အား အနည်းငယ်ပိုပေးနိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ ဤနေရာတွင် ရှိနေပါသည်... အိမ်ခြံမြေဖိုရမ်သည် သင့်အား ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အသိပညာနှင့် အထူးသီးသန့် အကျိုးကျေးဇူးများစွာကို ပေးပါသည်။ သင့်အတွက် မှန်ကန်သော ပက်ကေ့ဂျ်ကို ရွေးချယ်ပြီး သင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော သန့်ရှင်းသော အိမ်ခြံမြေအချက်အလက်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးကို ခံစားလိုက်ပါ။
$0 တစ်လလျှင် /
Facebook ဖိုရမ်သို့ ၀ င်ပါ
လျှော့စျေးများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများ
ဘာသာစကား ၁၂ မျိုးဖြင့်အကြောင်းအရာ
အခမဲ့ Join ပါ
$9999 $3000 သုံးလ
Real Smart ကြေးပေးသွင်းခြင်း၏အင်္ဂါရပ်များနှင့်အပြင် ...
တစ် ဦး ချင်းအုပ်စုလိုက်လေ့လာခြင်း
$299 $150 သုံးလ
အတိုင်ပင်ခံနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကို ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းလျှော့စျေး
ရပ်ရွာအဖြစ်အပျက်များအားလုံးကို ၀ င်ကြေးအခမဲ့ဖြစ်သည်။
$9999 $5000 သုံးလ
$9999 $3000 / နှစ်
$9999 $3000 ၁၂ လ
သင်၏ site သည်မည်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသနည်း။
Real Estate ကုမ္ပဏီသည် ၀ န်ဆောင်မှုတိုင်း၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုကူညီရန်သင့်အားလုံခြုံသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုပြုလုပ်ရန်ကူညီသည်။ Kabbalah ဂဏန်းတွက်စက်များကို Facebook နှင့် site တွင်လေ့လာခြင်း၊ အထူးလျှော့စျေးများဖြင့် ဦး ဆောင်သင်တန်းများအတွက်စာရင်းသွင်းခြင်း၊ site ကိုစာရင်းပေးသွင်းပါ။ တက္ကသိုလ်၊ ငွေလွှဲခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအတွက်အိမ်ခြံမြေဖိုင်များ၊ ဂဏန်းတွက်စက်များ၊ site နှင့်အခြားများစွာကိုအသုံးပြုနေသော site များမှအလိုအလျောက် update လုပ်သော) အရောင်းအ ၀ ယ်၊ ဘဏ်အကောင့်သို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုဖွင့်ခြင်း၊ လေယာဉ်စီးရန်မလိုခြင်း၊ ပညာပေး podcast တစ်ခု၊ ရပ်ရွာနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း၊ လမ်းညွှန်ခြင်း ကျွမ်းကျင်သောကုမ္ပဏီများနှင့်အိမ်ခြံမြေကုမ္ပဏီများ၊ ရွေးချယ်ထားသော developer များနှင့်အခကြေးငွေများလျှော့စျေးများ၊ အိမ်ခြံမြေဖြစ်ရပ်များမှတ်တမ်းအိမ်ခြံမြေ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက်လူမှုကွန်ယက် ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံရန်အကောင်းဆုံးသောနိုင်ငံခြားပေါင်နှံပညာရှင်များနှင့်ဘဏ်များသည်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများအတွက်ငွေကြေးပိုမိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်သောဘဏ်များဖြစ်သည်။
အိမ်ခြံမြေကုမ္ပဏီများအတွက်လမ်းညွှန် အမေရိကန်တွင်လည်ပတ်နေသောအိမ်ခြံမြေကုမ္ပဏီဒါဇင်ပေါင်းများစွာ၏အချက်အလက်များပါဝင်ပြီး ၀ က်ဘ်ဆိုက်နှင့် Facebook အုပ်စုတွင်တွေ့နိုင်သည်။ ဖိုရမ်အဖွဲ့ဝင်များသည်ကုမ္ပဏီတစ်ခုစီအတွက်၎င်းတို့၏အထင်အမြင်များနှင့်အကြံပြုချက်များကိုမှတ်တမ်းတင်သည်။
ပလက်တီနမ်ကုမ္ပဏီများသည်အိမ်ခြံမြေနှင့်ဤကိစ္စအတွက်အကြံပြုထားသောကုမ္ပဏီများဖြစ်သည်။ ၎င်းမှာကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်သိသောကုမ္ပဏီများဖြစ်သည်။ ဤကုမ္ပဏီများအားအသင်းဝင်လမ်းညွှန်တွင်မတွေ့ရပါ၊ သူတို့၏အမှတ်တံဆိပ်သည်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဧရိယာ၌ဤစာမျက်နှာ၏အောက်ခြေတွင်ရှိသည်။
အင်္ဂလိပ်၊ ရုရှား၊ စပိန်၊ အာရဗီ၊ တရုတ်၊ ဟီးဘရူး၊ ဒတ်ခ်ျ၊ ပြင်သစ်၊ ဂျာမန်၊ အိန္ဒိယ၊ အီတလီ၊ ပေါ်တူဂီနှင့်အခြားများစွာသောအဆင့်များသို့အဆင့်မြင့်သဘာဝဘာသာပြန်ချက်ဖြင့်အလိုအလျောက်ဘာသာပြန်သည်။
သင်အကြိုက်ဆုံးဘာသာစကားသို့ပြောင်းရန် site ပေါ်တွင်ဘာသာစကားရွေးချယ်ရေးခလုတ်ကို သုံး၍ မရပါ။
အသိုင်းအဝိုင်းနှင့်ပူးပေါင်းပါ ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါ်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူနှင့်အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းပေါင်းထောင်ချီသောအသိုင်းအ ၀ န်းတစ်ခုရှိသည်။
မေးခွန်းတစ်ခုပို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်ခြံမြေဖိုရမ်သည် site ပေါ်တွင်ရှိသည် ဒါမှမဟုတ် ဖေ့စ်ဘွခ်ပေါ်မှာ
အစစ်အမှန် Smart ကျွန်ုပ်တို့၏အလွန်ကောင်းမွန်သောပညာရေးဆိုင်ရာစာရင်းပေးသွင်းမှုကိုပူးပေါင်းပါ အိမ်ခြံမြေစွယ်စုံကျမ်းတစ်ခု၊ အိမ်ခြံမြေဖိုင်များ၊ ပညာရေးဗွီဒီယိုများနှင့်ပညာရေး podcasts များ၊ အလိုအလျောက်ငွေပေးငွေယူနယ်ပယ်တစ်ခုနှင့်အခြားအရာများအတူတကွ။
ရွေးချယ်ထားသောသင်တန်းကိုလျှော့စျေးဖြင့် ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီများမှ site ၏အဖွဲ့ဝင်များအတွက်အထူးအကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုဖြစ်သည်
အိမ်ခြံမြေကုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့်အကျိုးစီးပွားတစ်ခုသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်တည်ရှိပြီးအမေရိကန်ရှိအကြီးဆုံးအိမ်ခြံမြေကုမ္ပဏီများနှင့်ချိတ်ဆက်ထားပြီးဖြစ်သည်။ အမေရိကန်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် turnkey ပိုင်ဆိုင်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသောပိုင်ဆိုင်မှုများကို ၀ ယ်သည်။ ဤအိမ်ရာများ၏အားသာချက်မှာငွေပေးငှားသူ၊ ငွေပေးချေမှုမှတ်တမ်းနှင့်အိမ်ရာစျေး ၀ ယ်သောကုမ္ပဏီတို့ကပြန်လည်ပြုပြင်ထားသောကြောင့်ဤကုမ္ပဏီသည်အင်တာနက်အားလုံးရှိသည်၊ ထို့ကြောင့်အိမ်မြေ ၀ ယ်လိုအားကောင်းပြီးအမြဲတမ်းငှားရမ်းနိုင်သည်။ မရ။
ငါတို့ကမင်းရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံချင်တဲ့နေရာကိုရွေးချယ်နိုင်အောင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ပူပြင်းတဲ့စျေးကွက်အားလုံးမှာ turnkey ကုမ္ပဏီတွေနဲ့အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ - အခမဲ့အကြံဥာဏ်
အတွေ့အကြုံအများကြီး! အကြံဥာဏ်များစွာရနိုင်သောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်သောဤတွင်ယုံကြည်ရသောလူများရှိသည်။
ငါ့မှာဗဟုသုတရှိရင်မင်းကအစပိုင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူကပိုကောင်းတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုဒါမှမဟုတ်လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်ကိုပိုကောင်းတဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုပေးနိုင်တဲ့သူဖြစ်အောင်ကူညီပေးနိုင်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ့အတွက်ဒါဟာကောင်းချီးတစ်ခုပဲ။ လူတိုင်းအတွက်ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အခွင့်အရေးများစွာရှိသည်။